Akụkọ - bauma weghachitere oge COVID-19
P11 isi mgbapụta silinda & akụkụ
P 15 AKWISTKWỌ AKW ACKWỌ & ACCS
P17 Mkpọ ụkwụ & FLANGES
P20 ezumike maka igbe akara
AKW CONKWỌ M02 & ACCS
Pipe Nzipu & Ikiaka
Datebọchị ọhụụ maka Bauma 2022. Ọrịa ahụ na-ebute ngosipụta azụmaahịa German na Ọktọba
A ga-eme Bauma 2022 na Ọktọba, site na 24 ruo 30, kama mkpokọta ọdịnala na ọnwa Eprel. Ọrịa ahụ a na-akpọ Covid-19 mere ka ndị na-ahazi ọrụ yigharịa ihe omume dị mkpa maka ụlọ ọrụ nke igwe ihe owuwu.
Bauma 2022 a ga - eme n’Ọktọba, malite n’abalị iri abụọ na anọ ruo na nke iri atọ, n’abụ na mgbakọ na - agakọ n’ọnwa Eprel. Maa amụma? Ọrịa ahụ a na-akpọ Covid-19 mere ka ndị na-ahazi ọrụ yigharịa ihe omume dị mkpa maka ụlọ ọrụ nke igwe ihe owuwu. N'aka nke ọzọ, ngosi ngosi ahia ọzọ nke ụwa nke Bauma, nke emere ndokwa na South Africa na 2021, akagbuola nso nso a.
Bauma 2022 yigharịrị na October. Nkwupụta gọọmentị
Ka anyị gụọ nkwupụta gọọmentị nke Messe München, wepụtara na ngwụcha izu gara aga. «N'ịtụle oge oge kachasị ogologo maka ndị na-eme ihe ngosi na ndị na-ahazi na ngosipụta azụmaahịa kachasị ukwuu n'ụwa, a ga-eme mkpebi ugbu a. Nke a na-enye ndị na-eme ihe ngosi na ndị ọbịa ezigbo usoro ndabere maka ịkwadebe bauma na-abịa. Na mbido, a ga-eme bauma site na Eprel 4 ruo 10, 2022. N'agbanyeghị ọrịa a na-efe efe, nzaghachi nke ụlọ ọrụ na ọkwa ntinye akwụkwọ dị oke elu. Agbanyeghị, n'ọtụtụ mkparịta ụka nke gị na ndị ahịa, enwere mmata na-arịwanye elu na ụbọchị Eprel metụtara ọtụtụ enweghị ntụkwasị obi n'ihi ọrịa na-efe ụwa. Echiche na-agbasasị bụ na ọ siri ike ugbu a ịtụle ma njem zuru ụwa ọnụ-nke dị oke mkpa maka ọganiihu nke ngosipụta azụmaahịa-agaghị abụ nke a na-egbochi kpamkpam n'otu afọ.».
Ọ bụghị mkpebi dị mfe, dị ka onye isi oche nke Messe München si kwuo
«Mkpebi nke yigharịrị bauma adịghịrị anyị mfe», Kwuru Klaus Dittrich, Onye isi oche na onye isi oche nke Messe München. «Mana anyị kwesiri ime ya ugbu a, tupu ndị ngosi ahụ amalite ịhazi ntinye aka ha na azụmaahịa ahụ ma tinye ego ha ga-etinye. O bu ihe nwute, n'agbanyeghi usoro ogwu nke amaliteputara n'uwa dum, odighi ike ikwuputa mgbe oria ojoo a ga na-achikota na njem ndi ozo n'uwa agaghi adi ozo. Nke a na - eme ka isonye siri ike ịhazi ma gbakọọ maka ndị na - eme ihe ngosi na ndị ọbịa. N'ọnọdụ ndị a, anyị agaraghị enwe ike mezuo nkwa anyị bụ isi na bauma, ahịa azụmaahịa ụwa na-eduzi, na-anọchite anya ụdị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-ewepụta mba ụwa dịka ihe omume ọzọ enweghị atụ. A sị ka e kwuwe, mbipụta ikpeazụ nke Bauma nabatara ndị so na mba 200 gburugburu ụwa. N'ihi ya, mkpebi ahụ na-agbanwe agbanwe ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya».